Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် ပင်လယ်အော် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပင်လယ်အော် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
SHINYU LIGHT CO., LTD. တွင်တည်ရှိသည် Taiwan ထုတ်လုပ်ခြင်း, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ကုန် ပင်လယ်အော် တစ်ဦးအတွေ့အကြုံနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းနှင့်အတူငါတို့ရှိသမျှသည်ကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံအများအပြားနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတင်ပို့ရောင်းချကြပါပြီ။ ထို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အကြားနာမည်ကောင်းရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု!
ပုံစံ - F9 LED Patio Light 80-150W 95° With O ring
ပထမအဆင့်သည်စွမ်းအင်ချွေတာရန်ဖြစ်သည်,CO2 စားသုံးမှုကိုလျှော့ချ.SHINYU သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများအားအကောင်းဆုံးသောအခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်အတွက်စုစုပေါင်းဖြေရှင်းချက်နှင့် Consulatant ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်,ရလဒ် 50 လျှော့ချပြသထားတယ်%စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုကနေစားသုံးမှု.
60W မှ 180W သို့အလင်းဒီဇိုင်းသည် ၂ ဖြစ်သည်.၉ ကီလိုဂရမ်
အချိုးကျမှန်ဘီလူးပုံစံ(Beam ထောင့်:56.95.98X132 ဒီဂရီ).
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/high-bay.html
ပင်လယ်အော် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ ပင်လယ်အော် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ